Android Oreo dia ho tonga amin'ny LG G6 tsy ho ela | Androidsis
Eder Ferreño | | Tutorials, Android Version
Efa ho roa volana izao Android Oreo lasa zava-misy. ny kinova vaovao amin'ny android tonga manitsakitsaka ary manolotra fanovana maro amin'ny asany. Noho ireo fiovana ireo dia nanjary ny kinova farany tsara amin'ny rafitra fiasa hatrizay.
tsikelikely, Android Oreo dia ho tonga amin'ny mpanamboatra, miaraka amina finday avo lenta. Ho an'ny mpampiasa Samsung dia somary lava kokoa ny fiandrasana, satria tsy ho tonga raha tsy amin'ny fiandohan'ny taona. Saingy, ho an'ireo izay manana a LG G6 ho fohy kokoa ny fiandrasana. ny ny finday dia hanavao ny Android Oreo tsy ho ela.
El LG G6 no telefaona malaza indrindra fa ny orinasa Koreana Tatsimo dia nanomboka tamin'ity taona ity, miaraka amin'ny LG V30. Telefaona finday avo lenta mahery vaika iray izay voalohany nandray ny fironana fampisehoana tsy bezel. Raha fintinina, ity fitaovana ity dia nanjary mendrika ny iray amin'ireo sainan'ny marika.
Raha mijery ny lasa isika dia afaka mahita izany LG dia iray amin'ireo marika voalohany manavao ny tsimbadika farany amin'ny Android. Ny multinational koreanina dia iray amin'ireo voalohany nanavao ny findainy Android Marshmallow. Toy izany koa no nitranga Android Nougat. Ka tsy mahagaga raha miverina ny zava-misy amin'ny fahatongavan'i Android Oreo.
Ho an'ny tsena Koreana Tatsimo dia antenaina fa Android Oreo dia tonga amin'ny LG G6 amin'ny herinandro ho avy. Mbola tsy fantatra ny daty ofisialy iray, na dia milaza aza ny haino aman-jery isan-karazany fa tsy ho ela izy io. Ka mety ho izany alohan'ny hifaranan'ny volana novambra, ny telefaona dia efa manana ny kinova farany an'ny rafitra fiasa.
Ireo fiasa vaovao natolotry ity kinova amin'ny rafitra fiasa ity dia mety hanampy ny finday hanana firoboroboan'ny tsena. Mampalahelo fa na eo aza ny telefaona tena feno dia feno ny LG G6 dia nanaloka ny varotra nataon'ny tsena avo lenta hafa. Ho hitantsika eo raha manampy ny telefaona ity fanavaozana ity. Inona ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Ny LG G6 dia hanavao ny Android Oreo tsy ho ela
Manana an'ity finday ity aho ary manome toky anao aho fa mahavariana tokoa izany. Mialoha ny ambin'ny tsena miaraka amin'ny efijery 18: 9, izay hanana finday avo lenta tsy ho ela. Ny safidy sary sy horonan-tsary dia tsara, ao anatin'izany ny fifehezana boky sy sary amin'ny fomba feno. Miasa tsara ny bateria. Tena atoro anao tokoa
Ny lalao Halloween mahatsikaiky indrindra amin'ny Android-nao